Iapile iphone 7s iphone 8 rumor review specs features design price date date
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Apple iPhone 7s, 7s Plus, iPhone 8 rumor review: uyilo, ii-specs, amanqaku, amaxabiso, umhla wokukhutshwa
Kwi-2017, silindele ukuba iApple yazise ngebhetshi yayo elandelayo yee-iPhones. Ukuba ilogic iyinto ehamba nayo, kwaye ihlala ikhona, ezi ziya kuba zii-iPhone 7s kunye ne-iPhone 7s Plus. Nokuba ayiyiyo le nto iApple igqiba ukuyibiza, iqinisekile ukuba ii-iPhones ze-4.7 kunye ne-5.5 ziya kuphumelela ngezixhobo ezigqwesileyo.
Akufanele silibale ukuba u-2017 uphawula Isikhumbuzo seminyaka eli-10 somnombo we-iPhone Kwaye iiapile & iiapos ziye zahletywa ukuba zinento emnandi kumbhobho.
Yeyiphi into ebanjwa ngesandla esithetha ngayo? Ewe, loo nto & iiapos; s kuya kuthiwa iya kuba yipremiyamu ye-iPhone esebenzisa uninzi lweempawu ezinomdla nezinomdla. Ukuhleba kuyatsho & iiapos zihamba phantsi kwegama likaFerrari, nangona thina & apos; sivame ukuva ukuba iyakuphela ibizwa ngokuba yi-iPhone 8. Kuxelwa ukuba izakushukumisa izinto ngokwazisa uyilo olutsha lweglasi, egobile Umboniso we-OLED, ikhamera-mbini enjenge-iPhone 7 Plus, kwaye uninzi lwezinye izinto eziya kuhlala ziyimfihlakalo de iApple ityhile eso sixhobo.
Kuninzi esinokuthetha ngako, ke iiapos mazingalahli ixesha! Hlanganisa ujikeleze umlilo wekampu kwaye masithethe ngayo yonke into evuzayo kunye namarhe malunga ne-iPhones yonyaka ozayo!
5. Iimpawu zesoftware
6. Amaxabiso kunye nomhla wokukhutshwa
Uyilo olugqityiweyo olunomlinganiso ophezulu wesikrini ukuya emzimbeni
Akukho qhosha lasekhaya elibonakalayo
Isikena somnwe esinefinger ngaphakathi ngaphakathi kwisibonisi
Ikhamera ezimbini ngasemva
Bold kunye ne-bezel-ngaphantsi
Ngokungafaniyo neminyaka edlulileyo, sinezizathu ezininzi zokukholelwa ukuba iApple iya kuguqula uyilo lweePhones zayo. Ewe siyazi ukuba le nto iyaqikelelwa unyaka nonyaka, kodwa ngeli xesha iyahluka - ngelixa kungekho mifanekiso yoyilo okanye izinto ezizezona zivuzayo okwangoku, uninzi lwangaphakathi lukholelwa ukuba ubuncinci kulo nyaka kunye ne-apos; ubukhulu becala uyilo lweglasi. Masitsibe ngqo kuyo!
Umzimba weglasi yonke onesakhelo sensimbi esingenasici
Omnye wabahlalutyi onerekhodi ehamba phambili yokujikeleza, iMing-Chi Kuo ye-KGI Securities, ubanga ukuba ii-iPhone 7s kunye nee-7s Plus ngokuqinisekileyo ziya kuqhayisa ngeglasi kunye nasemva kwayo, mhlawumbi ifana ne-iPhone 4 kunye nee-4s. Inqaku leKu & apos longeza ukuba ngokungqongqo zonke izindlu zeglasi azizukubakho ngenxa yeepos; iibhotile zetekhnoloji 'kwaye ngenxa yoko, ziya kuhamba nesakhelo sesinyithi. Kuyabonakala ukuba, iApple iya kugxotha ialuminium endaweni yokuqina okungaphezulu, intsimbi engaphandle kwentsimbi yeemodeli zokugqibela.
Oku kuyakubiza iApple ngakumbi, kodwa kuya kunika ii-iPhones zodidi oluphezulu ukugqiba, ukugqiba kwepremiyamu. U-Kuo ulindele ukuba zombini iimodeli ezizayo ze-4.7 kunye ne-5.5-intshi zibonakalise i-chassis yeglasi, kodwa ziinguqulelo eziphezulu kuphela eziya kuxhaswa sisakhelo sesinyithi. Oku kufana kakhulu nendlela i-Apple eyahlula ngayo inqanaba lokungena le-Apple Watch kwiinguqulelo zabo eziphezulu. Ukuba amarhe okugqibela awabambi manzi, iApple inokuphinda ibuyele kwi-aluminium alloy eyayiyisebenzisa kwi-iPhone 7/7 Plus kunye ne-iPhone 6s / 6s Plus, eyile ngothotho oluqinileyo nolomeleleyo 7000 aluminium alloy.
I-iPhone 8 esekwe kwisikimu esivuzayo
I-Apple iPhone 7s, i-iPhone 8 iguqulela kunye neengcinga
Siyakholelwa esinye sezizathu zokuba ii-iPhones ezintsha zitshintshe ukusuka kwisinyithi ukuya kwiglasi ukuxhasa ukutshaja ngaphandle kwamacingo. Ukuqinisekisa ukusebenza okuphezulu, sikholelwa ukuba kufanelekile kakhulu kubaxhasi be-EMS ukuba baphuhlise kwaye benze itshaja engenazingcingo kuba emva koko uvavanyo olunokubakho lunokwenziwa. Njengoko u-Hon Hai efuna ukuhambisa uninzi lwezixhobo zokuphuhlisa kunye nokuvelisa i-OLED ye-iPhone, silindele ukuba uPegatron uya kuba ngumthengisi okhethekileyo kwitshaja engenazingcingo. ' --Ming-Chi Kuo, umhlalutyi weApple
Ngaba i-iPhone ine-edge-to-edge, isibonisi esitshibilikayo kunye nee-bezels ezincinci phezulu nasezantsi? Oku bekuya kuvakala ngathi liphupha lombhobho kwiminyaka embalwa eyadlulayo, kodwa yona yeyona nto iphindaphindwayo ngamarhe aphindwe kabini nge-Apple & apos; s 2017 iPhone lineup, ngakumbi i-iPhone 8.
Ukuvuza okuninzi kunye neengcebiso zangaphakathi bezama ukusiqinisekisa okwethutyana ngoku ukuba i-iPhone 8, ngakumbi, iya kuba 'ubukhulu becala' ngaphambili. Ewe kuya kubakho i-bezels, kodwa ezi ziya kuba zincinci njengoko ziza, zifana ne-Samsung Galaxy S8 / S8 + kunye ne-LG G6.
Akukho qhosha lasekhaya
Iapile kunye neapos; s sikhonkxiwe ukuba sichitha iqhosha lasekhaya elibonakalayo, ebesisisityebo seminyaka eli-9 ngoku. Ubuncinci loo nto siyiva malunga ne-iPhone 8. Endaweni yento yezixhobo zehardware, uCupertino uya kuthi asebenzise i-injini yakhe ye-taptic ukulinganisa imvakalelo yokuchukumisa iqhosha lehardware. Ukususwa kweqhosha lasekhaya elihambayo kunye ne-iPhone 7 yinto enikezelweyo yokuba iApple kunye nomnqweno wokulahla ngokupheleleyo le nto yezixhobo zekhompyutha. Kucingelwa ukuba, abasebenzisi baya kuba nakho ukubamba i-3D kwiscreen kwindawo ethile ukuze baye kwiscreen sabo sasekhaya, esona sisetyenziselwe eli qhosha kunye neapos. Banayo itekhnoloji, ngoku bafuna isibindi kuphela!
Iipaneli eziphambili ze-iPhone ngaphambili nangasemva
Kuthekani ngenzwa yeminwe?
Ukucofa iqhosha lasekhaya kuya kuthetha ukuba iqhosha leminwe liya kufuneka lifumane indawo entsha. Wonke umntu kunye nombono we-apos ubonakala ngathi, zonke izinto zithathelwa ingqalelo, ubukhulu becala ziyafana: I-Apple kuyakufuneka ifake isikena seminwe kwisibonisi kuba isivamvo somzimba esime ngasemva asiyongcamango esengqiqweni. Ngethamsanqa iApple, sele zikhona iindawo zokuphefumla ezinje ngeeKorea ezivela kwiCrucial Tek zaqala ukubhengeza isisombululo, emva koko iQualcomm & apos; s ye-ultrasonic yalandelwa, kunye ne-Synaptics juggernaut yayingekho & apos; isemva kakhulu. Enye yezi teknoloji ingezantsi inokuba yile nto ugqirha ayalele ukuba ii-iPhone 7s. I-7s kunye ne-iPhone 8 umjelo weqhosha lasekhaya / iskena somnwe sokulunga.
Ngelishwa, sisenokungazi malunga nokubekwa kwe-ID yesibambo kude kusondele uSeptemba. Njengoko sixoxe ngaphambili, iApple ngokucacileyo inezicwangciso ezibini zokujongana nesikena sayo seminwe / iqhosha lasekhaya. Isicwangciso 'A' sifuna ukuba ifakwe ngaphakathi .55 kuye kwi-.65 intshi ye-5.8-intshi touch screen. Ukuba oku akunakwenziwa ngexesha, isiCwangciso 'B' sineqhosha lesazisi seTouch elibekwe ngasemva kwifowuni. Ngelixa ityala le-iPhone 8 elisandula ukuvuza laveza ukusikwa okusetyhula ngasemva okwakubonakala ngathi kwenzelwe iqhosha elijonge ngasemva kwi-ID yesazisi, abo banolwazi bathi ukusikwa kwe logo yeApple.
Ngokwenyani, iApple sele inikwe amalungelo awodwa omenzi wechiza alahla iingcebiso ezimbalwa malunga neqhosha le-iPhone kunye ne-bezel-future.
I-Apple inikwe amalungelo awodwa omenzi wechiza kwiglasi yeglasi, ifowuni ebonisiweyo egobile. nezikena zeminwe ezingaphantsi kweglasi
Ukumelana namanzi kulapha ukuze uhlale
Ngelixa kuyinyani ukuba thina asivanga kwanto inxulumene nokuxhathisa kwamanzi ii-iPhone 7s kunye nee-7s Plus, zilungile kwaye zichanekile ukucinga ukuba eli nqaku liza kuhlala likhona ukusukela ngoku. Ukuxhathisa amanzi ngokungathandabuzekiyo luphawu oluluncedo olunokuba nalo kwaye akunakuze kuhlale kukho ukongezwa okukodwa kwi-iPhone 7/7 Plus.
Ngaba iya kuthelekiswa njani ne-iPhone 7 kunye ne-iPhone 7 Plus, phakathi kwabanye?
I-Apple iPhone 8 iya kubonisa ubukhulu be-143.59 x 70.94 x 7.57 mm. Ukubeka la manani ngokwembono, iApple iPhone 7 imilinganiselo ye-138.3 x 67.1 x 7.1 mm. Oko kuthetha ukuba i-iPhone 8 iya kuba nkulu macala onke kune-iPhone 7. Xa ithelekiswa ne-Apple iPhone 7 Plus, enobunzima obuyi-158.2 x 77.9 x 7.3 mm, i-iPhone 8 incinci. Kuyinyani nokuba le yokugqibela inescreen esikhudlwana. Unqamle-ngo-ngo-ngono kufutshane nokujonga okungaphantsi kwe-bezel yohlelo lweminyaka elishumi kwenza oku kwenzeke. UBenjamin Geskin, ovelise uguqulelo oluninzi lwe-iPhone kulo nyaka, udale imifanekiso enomdla yokuba wonke umntu ayisebenzise. Eyokuqala ibonisa iApple iPhone 8 ebekwe phakathi phakathi kweApple iPhone 7 kunye neApple iPhone 7 Plus. Kwakhona, yintoni enomdla yindlela isikrini se-iPhone 8 esikhulu ngayo kunaleyo ikwi-iPhone 7 Plus nangona eyona fowuni incinci. Umfanekiso wesibini awenzileyo ubonakalisa i-Apple iPhone 8 phakathi kwe-Samsung Galaxy S8 kunye ne-Samsung Galaxy S8 +.
Ukusuka ekhohlo ukuya ekunene-i-iPhone 7, i-iPhone 8, i-iPhone 7 kunye
Kwaye nantsi indlela i-iPhone elandelayo enokubonakala ngathi ixhaswe ngayo ecaleni kweGPS S8 kunye ne-S8 +:
Ukusuka ekhohlo ukuya ekunene-iGlobal S8, i-iPhone 8, i-Galaxy S8 +Ityala lemifanekiso: iDropNews
Njenge-iPhone 7 kunye ne-iPhone 7 Plus, 2017 & apos; ii-iPhone 7s kunye nee-7s Plus kulindeleke ukuba zize nemiboniso ye-4.7 kunye ne-5.5. Zombini ezi zinto, ziyafana nezangaphambili zabo zexesha elide, zikrokrelwe ukuba zifike ngemiboniso yeLCD. Siqinisekile ukuba ezi ziya kugcina iimpawu ezizodwa zemiboniso ye-iPhone 7/7 Plus, eziqhayisa ngemibala egqibeleleyo kunye nokuqaqamba okugqwesileyo. Asivanga kwanto ngokukodwa malunga naluphi na utshintsho kwisisombululo, kude kube sisaziso esithe xhaxhe, sisacinga ukuba ii-iPhone 7s ziya kuza nesisombululo se-pixels esingu-750 x 1334, ngelixa umntakwabo omkhulu eza kusebenzisa ipaneli yokubonisa ye-HD epheleleyo.
Ngoku, i-iPhone 8 enamahemuhemu iya kuqhayisa nge-5.8-intshi eguqukayo yokubonisa i-OLED. Yintoni enomdla apha kukuba indawo esebenzayo ye-apos ithotywe ukuba ibe yi-5.1 okanye i-intshi ezi-5.2 ngobukhulu, iscreen sonke sisongele ecaleni kwesakhelo sefowuni kwaye sidibanise ngaphandle komatshini nefowuni. Njengoko besesitshilo ngaphambili, ngokungafaniyo nalo lonke olu luhlu, oku kunokuba yinto ye-OLED, eyokuqala yeApple. Isiboniso seSamsung sikhonjisiwe njengomthengisi okhethekileyo kuloo mntu, ngaphezulu kwe-40 yezigidi zeepaneli zokubonisa ze-OLED ezixhonyiweyo ukuba zinikezelwe yikontrakta. Okwangoku, bonke abanye abadlali kumzi mveliso we-OLED- i-Sharp, i-JDI, i-AUO kunye ne-LG-nabo bahletyelwa ukuba bakumakhadi okubonelela ngeepaneli, nto leyo esenza ukuba sicinge ukuba iSamsung isenokungabi sisokontraka esikhethekileyo.
Kodwa kutheni i-OLED, kwaye kutheni ubhetyebhetye? Ewe, ilula, ezo zinto ziyimfuneko yokubonisa amarhe egoso. Izikrini ze-LCD azinakwenza okwangoku kodwa ii-OLED zinako. Kungenxa yokuba unokuvelisa umboniso we-OLED kwisiseko seplastiki kwaye ugobe isiboniso kangangoko uthanda, ngelixa ii-LCD zinokwenziwa kuphela kwiglasi yeglasi. Ingxelo yakutshanje evela eMzantsi Korea ithiInguqulelo ye-OLED ye-iPhone entsha iya kugotywa njengoko iApple yayalela yonke i-OLED yeplastikhi- hayi iglasi- kwiSamsung Display. Isamsung iyakwazi ukubonelela ngeeyunithi ezingaphantsi kwesigidi se-100 se-OLED egobileyo kwi-Apple. '
I-chipset ye-A11 (phantse) inikiwe
Ukuza kuthi ga ngoku, thina kunye neapos zethu sivile uninzi lwamahemuhemu asengqiqweni ngokubhekisele kwizixhobo ezingaphakathi kwi-iPhone 7s kunye ne-7s Plus. I-iPhone 7 kunye ne-7 Plus ifike nge-quad-core 2.4GHz Apple A10 Fusion chipsets ngaphakathi, kwaye i-rumor mill iyakhawuleza ukucinga ukuba ibhendi elandelayo iza kufika neetshipsi ze-A11 ngaphakathi. I-Apple iyahambelana nezikim zabo zokuthiya amagama, ke siqinisekile ukuba ubuncinci eli gama linikiwe.
Nangona kunjalo, ukuya kuthi ga kwi-specs ze-Apple A11 chipset, indawo yokuguba ngamahemuhemu yomile njenge-Death Valley. Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo seva ukuba i-TSMC esekwe eTaiwan isenokuba ngumvelisi okhethekileyo wenkqubo-ye-chip kwaye iya kuba isebenzisa inkqubo yokuvelisa ye-10nm FinFET, kodwa ukusukela ngoko, ulwazi malunga nemisipha yesilicon ezayo ibingacacanga ncam.
Kwinqaku elinxulumene noko, iziphumo zebhentshi evuzayo ye-Apple A10X chipset, ekulindeleke ukuba inike amandla iApple kunye neapos, iipilisi zePad Pro elandelayo, peyinta umfanekiso omnandi we-2017-le ikwindawo entle kakhulu eGeekbench, ibala i-4236 kwisiseko esinye test kunye no-6588 kuvavanyo lwe-multi-core. Oko kuthelekiswa namanqaku angama-3490 (isiseko esinye) kunye nama-5580 (isiseko esisisiseko) se-A10 chipset. Ukuba iApple A11 iyawugcina loo mzuzu, kufanele ukuba ibe sisampulu esilwanyana, ubuncinci kwithiyori. Sitsala ulindelo ngolindelo!
I-Apple A10X ngasekunene, iApple A10 kwangoko ngasekhohlo kwayo. Khawufane ucinge iApple A11 kunye nokusebenza!
I-RAM: indala, indala, okanye akunjalo?
Ngokubhekisele kwi-RAM, akukho nto siyivileyo ngokukodwa, ke siya kuthatha ukuba ii-7s eziqhelekileyo ziya kuza ne-2GB ye-RAM, ngelixa ii-7s Plus ziya kugcina izinto zihamba ngokutyibilikayo nge-3 gig ye-RAM. Ukuya kuthi ga kwi-iPhone Ferrari echaphazelekayo, sinokuqikelela kuphela.
Ukugcina: akukho tshintsho lulindelweyoOkuninzi kuye wonke umntu & ekuvunyelweni, iApple ekugqibeleni yaphosa uhlobo olusezantsi lwe-16GB yoluhlu lwayo lwe-iPhone kunye ne-iPhone 7/7 Plus kulo nyaka uphelileyo, oqhayisa iigigs ezingama-32 zokugcina kwiinguqulelo zazo ezisisiseko, ukwandisa ukuya kwi-128GB kunye ne-256GB. Asilindelanga ukuba nantoni na itshintshe kulo nyaka uzayo, kuba iiApple & iiapos azinakulindeleka ukuba zitshintshe kakhulu into ebalulekileyo iminyaka emibini ilandelelana- ngo-2017, siyakuthi sibenendawo ezingama-32, 128, kunye ne-256GB zokhetho kwi-iPhone 7s kunye 7s Ngaphezulu. Ngokubhekisele kwimodeli yeprimiyamu 'yeFerrari', siza kuphinda siphume kwilungu - sicinga ukuba iya kuhambelana nalo lonke ulungelelwaniso ngokhetho lokugcina okanye ukuhambisa kuphela nge-256GB ebhodini.
Imephu yobuso ye3D
Omnye wonjiniyela onjalo, uGuilherme Rambo, ufumene ulwazi malunga nenkqubo yokuseta i-ID ye-Apple iPhone X. Lo ngumzekelo wesikhumbuzo seminyaka elishumi oza kuthi ubonise iphaneli ye-OLED. I-Apple ayikwazanga ukufaka i-ID yesikena somnwe phantsi kwescreen se-OLED. Kwangelo xesha, iya kube isusa iqhosha lasekhaya. Ngenxa yoko, iApple kwafuneka ibhenele kwisicwangciso B. Oko ngokucacileyo kufuna ukusetyenziswa kwekhamera ejonge ngaphambili eya kuthi isebenzise ukuskena kwe3D ukuqonda ubuso babasebenzisi.
Ngale nkqubo yokwamkelwa kobuso, ikhamera iya kuba nakho ukuvula i-iPhone X kwaye iqinisekise isazisi seApple Pay. Ngamanye amagama, nasiphi na isicelo esifuna i-ID yokuChukumisa sinokuqaphela ukubonwa kobuso endaweni yoko. Unokukhumbula ukuba umhlalutyi we-Apple u-Ming-Chi Kuo ubize oku kuseta 'Uguquko,' xa uxelela abathengi be-KGI Securities malunga nayo ngoFebruwari.
Ukuseta i-ID yobuso, abasebenzisi be-iPhone X baya kuthatha iiselfie zobuso babo kwii-engile ezahlukeneyo. Ukuthengwa kweApple kunye neapos; yeQinisekiso lobuchwephesha iRealFace mhlawumbi idlale indima enkulu kule nto intsha. Itekhnoloji yenkampani yakwa-Israeli kuthiwa ichanekile kakhulu xa kuziwa ekuqondweni kobuso, kwaye inokuqinisekisa umdlalo 'kwizigidi' zomzuzwana. Isoftware iya kuthi ivelise ngaphakathi imephu ye-3D yomsebenzisi kunye ne-apos, eyongeza umaleko ongaphezulu wokhuseleko kwifowuni. Itekhnoloji yeRealFace kunye neapos ziyabuthathaka, ukuze zichonge ngokuchanekileyo amawele afanayo.
Ngonyaka ophelileyo kunye nokwaziswa kwenkqubo yekhamera yeelensi ezimbini kwi-iPhone 7 Plus, iApple ngokuvulekileyo igumbi elitsha elinokubakho kulungelelwaniso lwayo lwe-2017 ye-iPhone. Ngaba ukuseta kwekhamera-mbini kuya kuhlala kuyinto ekhethekileyo kwi-iPhone enkulu? Ngaba i-iPhone 8 ehlebiweyo inqaku le?
Amarhe esasiwavileyo ukuza kuthi ga ngoku anqabile, kodwa abangaphakathi kumzi-mveliso bacebise ukuba ii-iPhone 7s azinakufumana useto lwekhamera ezimbini. Eli nqaku liza kuhlala likhethekileyo kwi-iPhone 7s Plus kunye neprimiyamu ye-iPhone 8, ebonakala ngathi inyathelo elifanelekileyo lokuba i-Apple ithathe.
Ukuya kuthi ga kubuchwephesha, silindele ukuba iApple iphucule kwisiseko esele siqinile esisekwe yintsimbi ngaphakathi kwe-iPhone 7 kunye ne-7 Plus. Zombini zine-12MP efanayo, i-f / 1.8 ye-lens shooter ephambili ene-pixels ezinkulu ze-1.22 & mu; m ezithi zikhanyisele ukukhanya ngokuthe ngqo kwi-1/3 'ekhanyise umva okhanyisiweyo. Umahluko kukuba i-iPhone enkulu inekratshi lesibini le-12MP f / 2.8 ilensi enobude obukhulu obugxile ekulahlekelweni yilahleko, i-2.0x Optical zoom.
Ikhamera ye-UI iya kubonelela ngemifanekiso yohlobo lwe-Digital-single Lens Reflex esebenzisa imifanekiso eyahlukeneyo yokukhanyisa ukulinganisa ubunzulu. Njengemeko yePortrait esungulwe kwi-beta kunyaka ophelileyo, isibane sePortrait sinokwenza into efanayo. Eli nqaku liza kuxhasa ukukhanya kweContour, ukuKhanya kweNdalo, ukuKhanya kweSiteji, iMono yokuKhanya kweSigaba, kunye nokuKhanya kweStudio.
Ukusonjululwa kwevidiyo kunye nesantya sokufaka i-iOS 11 kuya kubandakanya:
I-1080p HD kwi-240 fps 480 MB ene-1080p HD kwi-240 fps
I-4K kwi-24 fps (i-Footer) i-270 MB ene-4K kwi-fps ezingama-24 (isitayile sefilimu) (i-HEVC Footer) i-135 MB ene-4K kwi-24 fps (isitayile sefilimu)
I-4K kwii-fps ezingama-60 (iFooter) i-450 MB ene-4K kwii-fps ezingama-60 (isisombululo esiphezulu, egudileyo) (i-HEVC Footer) i-400 MB ene-4K kwi-60 fps (isisombululo esiphakamileyo, egudileyo)
Ke, kutheni usebenzisa ukuseta nkqo nkqo? Kukho izizathu ezilungileyo ezizizo zoko: Ewe, yiyo loo nto kanye esikufumanayo. Ukuba iApple inezicwangciso ezinzulu zeVR / AR, i-iPhone 8 inokuba nokuseta okujolise nkqo kwi-double-cam ukuvumela ukurekhoda iividiyo / imifanekiso ye-stereoscopic ye-3D. Ngamanye amagama, into ebizwa ngokuba yi & ldquo; nkqo & rdquo; ukuseta ikhamera kume kuphela xa i & apos ibambe ifowuni yakho ngokuthe nkqo, ukuba iyavakala.
Ukuze udubule kwi-3D, udinga iilensi ezimbini ecaleni ezisebenza ngaxeshanye ukwenza ubunzulu, njengamehlo akho ngoku. Kodwa emva koko, ukuba une & ldquo ezimbini ngokuthe tye & rdquo; zihambelana neekhamera ngasemva kwifowuni yakho, awunako ukwenza i-3D kwimowudi yokuma komhlaba, kuba iilensi azizukuhlala ecaleni komnye xa ujika ifowuni yakho ecaleni. Kwaye ekubeni ekuphela kwendlela yokubukela ividiyo yeVR kwifowuni yakho kukubeka kwiseti yentloko kwaye ube nayo phambi kwamehlo akho kwindawo ethe tyaba, ayizukuyenza nayiphi na ingqiqo ukubanakho ukudubula iividiyo ezime nkqo okanye imifanekiso .
Amaxabiso kunye nomhla wokukhutshwa
UApple angabhengeza i-iPhone 7s / i-iPhone 8 ngo-Septemba 17
Intengiso ikhonkxiwe ukukhaba ngoSeptemba 25
UBenjamin Geskin & rlm; -Ukuvuza okuye kwajikeleza ukuvuza kwe-iPhone 8 ngokungathi kuyaphambana kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo- uthumele umyalezo ophambili ku-Apple oza kutyhila iselfowuni entsha eshushu iya kubanjwa nge-17 kaSeptemba kwaye ukuthengisa kuya kuqala nge-25 kaSeptemba. . Ewe ayikho, kwaye akukho ndlela yokuqinisekisa ubunyani bolu lwazi, ke yithabathe ngqolowa yetyuwa.
Ukukhutshwa kukaSeptemba bekuyinto eqhelekileyo kule minyaka mihlanu idlulileyo kwaye silindele ukuba oku kungaguquki nakulo unyaka. Apha ngezantsi, uya kufumana itafile ebonisa ngokucacileyo izibhengezo kunye nokukhutshwa okulandelayo kwemarike yazo zonke ii-iPhones ukuza kuthi ga ngoku.
Ukukhutshwa kwangaphambili kwe-iPhone
Umzekelo Yaziswa Kukhutshwa
I-Apple iPhone 9/1/2007 1/29/2007
I-Apple iPhone 3G 6/9/2008 11/7/2008
I-Apple iPhone 3GS 8/6/2009 6/19/2009
I-Apple iPhone 4 7/6/2010 6/24/2010
I-Apple iPhone 4s 4/10/2011 10/14/2011
I-Apple iPhone 5 12/9/2012 9/21/2012
I-Apple iPhone 5s / 5c 10/9/2013 9/20/2013
I-Apple iPhone 6/6 Plus 9/9/2014 9/19/2014
I-Apple iPhone 6s / 6s Plus 9/9/2015 9/25/2015
I-Apple iPhone 7/7 Plus 7/9/2016 9/16/2016
Ukuqhubeka ngakumbi nokungqinelana nolo daba kukuba u-Apple utyholwa ngokuthumela imihla yokumnyama kubasebenzi be-Apple, phakathiNgoSeptemba 17 no-Novemba 4, ucebisa ukuba eli iya kuba lixesha elixakekileyo xa liyakufuna zonke izandla kumgangatho. Olu lwazi luvela kwinto ejongeka njengememo esemthethweni yeApple kubasebenzi, efunyenwe ngumthandi weApple uBenjamin Geskin.
'Gcina ukhumbula ukuba le mihla iya kutshintshwa njengoko imeko yethu yenkxaso yokulindela itshintsha, utshilo imemo.
Ukuya kuthi ga ngoku ngexabiso, silindele ukuba i-Apple ibe lixabiso kwi-iPhone 7s kunye nakwi-7s Plus ngokufanayo nakwindleko ze-iPhone 7 kunye ne-7 Plus xa kusungulwa. Nazi iiapos zamaxabiso abo babini ekusungulweni.
I-Apple iPhone 7 32GB 128GB 256GB
Ixabiso $ 649 $ 749 $ 849
I-Apple iPhone 7 Plus 32GB 128GB 256GB
Ixabiso $ 769 $ 869 $ 969
Ukuya kuthi ga kwi-rumor kwaye kunokuba i-iPhone 8 ithathelwe ingqalelo, ayithathi ubuchule bokuqonda ukuba ngaphandle kwayo kunye neempawu zayo ziya kuza ngexabiso eliphezulu. Asinalo uluvo lokuba i-Apple iza kuhlawulisa ntoni, kodwa inye into eqinisekileyo-abalandeli abazinikeleyo baya kuthi bakulungele ukuchitha imali eninzi i-Apple ekulungeleyo ukuyibiza nge-premium yayo ye-iPhone.
verizon vs & t
Ixabisa malini i-iPhone X yokulungisa isikrini? Ngoku iApple inempendulo
Beat the Prime Day rush and score Apple & apos; s iPad Air (2020) kwelona phuculo liphezulu kunanini na namhlanje
Abakwa-LG bathi i-Snapdragon 810 imiba yobushushu ijongiwe, i-LG G Flex 2 kunye ne-LG G4 zihlala zilungile
I-Casio Pro TREK SMART WSD-F30 uphononongo
I-Apple iPhone 6s vs iPhone 6 vs iPhone 5s: ukuthelekiswa kwe-specs
Uthotho lweLenovo Tab4 aluzukufumana i-Android 8.1 Oreo kude kube nguNovemba
I-iPhone SE (2020): yeyiphi umbala ekufuneka uyifumene?
Yu-Gi-Oh! Umdlalo wekhadi lekhonkco leDuel uya kwihlabathi liphela kwizixhobo ze-Android neze-iOS